के थियो कारण जसले प्रियंकालाई ट्रेलरमा समेत स्थान दिइएन ? यस्तो छ कारण !! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
‘वडा नम्बर ६’,’छक्का पन्जा’,’छक्का पन्जा २’मा आफ्नो अभिनय देखाउदै साथै चलचित्रमा आफ्नो लगानी समेत गर्दै आएकी प्रियंका कार्की आमा सरस्वती मुभिजको नया प्रस्तुति ‘छक्का पन्जा ३’मा भने ट्रेलरमा समेत अटाइनन। उक्त ब्यानरमा राम्रो मुनाफा बनाउदै चलचित्रमा देखिदै आएकी प्रियंका कार्की आखिर ट्रेलरमा समेत न अटाउनुको कारण के ?
कसैकी प्रेमिका बन्दै देखिबाट आमाको भूमिका समेत निभाएकी प्रियंका यस चलचित्र ‘छक्का पन्जा ३’मा भने लन्च भएका एकाद गितमा मात्रै सिमित देखिन्छन। चलचित्रको ट्रेलर चर्चामा रहेको छ भने हरेको मनमा भने प्रश्न उठेको छ, खोइ प्रियंका?
सायद चलचित्रका पूर्ण टिमले अब प्रियंकाका दिन छैनन् चलचित्र चल्नुमा उनको हात आगाडी नभएको भन्ने धारणा सहित न राखिएको हुन सक्छ। साथै उनको भूमिकालाइ चलचित्रमा नया स्थान लिएकी दिपिकाले ओगटेको पनि हुन सक्छ।
Chakka Panja 3Priyanka Karki
क्याप्टेनको गीत, अनमोल र उपासनाको गज्जब केमेस्ट्री (भिडियो सहित)